ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ (၁) | Zizawa's refuge
Posted by zizawa ⋅ 09/06/2010	⋅4Comments
တခါ တခါကျ ၀ါကျ တခုမှာ ပါတဲ့ စကားစုတိုင်းဟာ အဓိပ္ပါယ်ထွက်ပေမယ့် အဲဒိ အဓိပ္ပါယ်ထွက်တဲ့ စကားစုတိုင်းကို စုထားတဲ့ ၀ါကျဟာ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိတာမျိုး ရှိနိုင်တယ်။
ဥပမာ နေပေါ်မှာ မွန်းတည့်နေပြီ။
ဒီဝါကျမှာ ‘နေပေါ်မှာ’ ဆိုတာရော ‘မွန်းတည့်နေပြီ’ ဆိုတာရော နှစ်ခုစလုံးဟာ သူ့ချည်းသက်သက် အဓိပ္ပါယ် ထွက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောခဲ့တဲ့ ၀ါကျကတော့ အဓိပ္ပါယ် လုံးဝ မရှိဘူး။ မွန်းတည့်တယ်ဆိုတာ နေကို reference လုပ်ပြီးသာ ပြောလို့ရတဲ့ စကားမို့ နေပေါ်မှာ မွန်းတည့်တယ်ဆိုတာ …… ။ ဒီဥပမာက သူများဆီကနေ ခိုးချထားတာ။ မူလပြောသူက Wittgenstein။ သူပြောတာ အတိအကျက It’s five o’ clock on the sun တဲ့။
Wittgenstein ဥပမာကနေ ဆင့်ပွားထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် ဥပမာကတော့ ‘ဒီနေ့ လပေါ်မှာ လပြည့်နေ့’။ ‘ဒီနေ့’ ‘လပေါ်မှာ’ ‘လပြည့်နေ့’ သုံးခုစလုံးဟာ သူ့ချည်းသက်သက် အဓိပ္ပါယ် ထွက်တဲ့ စကားစုတွေ။ ဒါပေမယ့် ပြောခဲ့တဲ့ ဥပမာ ၀ါကျက absolute nonsense. စာဖတ်သူကို စော်ကားသလို ဖြစ်မှာဆိုးလို့ အကြောင်းပြချက် မပေးတော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံး ဥပမာ တခုထပ်ပေးမယ်။ ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေး ဘယ်ဟာ ပိုနီးလဲ။ What kind of question is that, watote?
တခါ တကြောင်းချင်းစီ ဖတ်ကြည့်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပေမယ့် တပုဒ်လုံးခြုံကြည့်လို့ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိတဲ့စာတွေ သီချင်းတွေ အများကြီးပဲ။
မဉ္ဇူရီ ငါ့အိပ်မက်တွေ နင်ဖန်ဆင်း နာရီသံတွေ ရင်ထဲ နှုတ်ဆက်လိုက် ….
အင်း ဆိုတာတော့ ဗမာလို ဆိုတာပဲ။ တလုံးချင်းစီလည်း အဓိပ္ပါယ်သိတယ်။ ဒါပေမယ့် သီချင်း တပုဒ်လုံးက ဘာအဓိပ္ပါယ်ထွက်သလဲမေးရင် ကိုယ်လည်း မသိဘူး။
« ကျေးဇူးတရား self-ownership and all that
ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ (၂) »
4 thoughts on “ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ (၁)”
“မဉ္ဇူရီ ငါ့အိပ်မက်တွေ နင်ဖန်ဆင်း နာရီသံတွေ ရင်ထဲ နှုတ်ဆက်လိုက် ….”
“မဉ္ဇူရီ၊ ငါ့ဖိနပ်ကို နင်ယူစီး၊ မသာအိမ်မှာ ပေါင်ပြီး ဖဲရိုက်လိုက်…”
တဲ့။😀 ကျွန်တော်လည်း ဒါသူများဆီက ခိုးချထားတာပဲ။ Wittgenstein ဆီကတော့ မဟုတ်ဘူး။ အငြိမ့်လူရွှင်တော် တစ်ယောက်ယောက်ဆီကပဲ။ မူရင်းထက် အဓိပ္ပာယ်ထွက်လာရင် လူရွှင်တော်တွေကို ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။😀
Posted by ပိုင် (Pi) | 10/06/2010, 03:03 Reply to this comment	ခစ် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာရယ်လို့ပဲ တွေးသွားပါတယ်
Posted by KNSL | 10/06/2010, 05:00 Reply to this comment	ကိုဇီဇ၀ါ …
“မဉ္ဇူရီ ငါ့အိပ်မက်တွေ နင်ဖန်ဆင်း … နာရီသံတွေ ရင်ထဲ နှုတ်ဆက်လိုက် ….”
ဒီစာသားက နှစ်ကြောင်းပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ကြောင်းနဲ့ တစ်ကြောင်းဆက်စက်မှု ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by Lun Lunn | 13/06/2010, 17:20 Reply to this comment	သိပိကြိုက်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ကော်ပ၊ီသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်းမဆိုရှင်ကိုတော့ မမှတ်မိပါ။သီရင်းနာမည်က Father time ဖြစ်ပါတယ်။
Quoteးတခါ တခါကျ ၀ါကျ တခုမှာ ပါတဲ့ စကားစုတိုင်းဟာ အဓိပ္ပါယ်ထွက်ပေမယ့် အဲဒိ အဓိပ္ပါယ်ထွက်တဲ့ စကားစုတိုင်းကို စုထားတဲ့ ၀ါကျဟာ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှ မရှိတာမျိုး ရှိနိုင်တယ်။
ဒါဆို အခုခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေ ဖတ်ကြည့်စမ်းပါ။တွေးစရာတစ်ခုခု ရစေချင်လို့ရေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကြိုးကြာနီ | 17/02/2012, 03:16 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...